कोरोनाबाट मृ्त्युहुनेको संख्या बढ्नुको कारण के हो त ? - स्वास्थ्य | Kantipur TV HD
कोरोना भाइरसको स‌ंक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेर ५ हजार नजिक पुगिसकेको छ । वैशाख महिनामा मात्र १६ सयभन्दा बढिको मृत्यु भयो । मृतकको संख्या अत्यासलाग्दो गरी बढ्नुको खास कारण के हो त ?
वीर अस्पतालमा शुक्रबार ७ संक्रमितले ज्यान गुमाए । यो संख्या अपरान्ह छ बजेसम्मको हो । वैशाख दोस्रो सातापछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा एकैदिन १२ जनासम्मको निधन भयो । शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा औसतमा दैनिक २ संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । अहिले हरेकजसो अस्पतालमा संक्रमितको मृत्यु नभएको दिन नै छैन । घरमा आफूखुसी औषधि र अक्सिजन प्रयोग गर्ने अनि रोगले च्यापेपछि मात्र अस्पताल आउने प्रवृत्तिले मृत्युदर बढेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
अहिले संस्थागत आइसोलेसनमा र अस्पताल उपचार गराइरहेका संक्रमितको संख्या साढे ८ हजार छ । १ लाख संक्रमित घरमै छन् । घरमा बसेका बिरामी सबैलाई अस्पतालले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।अस्पतालमा शय्या नपाएर गम्भीर प्रकृतिकै बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने विकराल अवस्था छ । यस्ता दृश्यले पनि अधिकांश संक्रमित घरमै बसेका हुन् । तर घरमा आफूखुशी औषधि प्रयोग गरी अस्पताल ढिलो आउने संक्रमितको उपचार गर्न कठिन भइरहेको छ । यस्तै मृत्युदर बढ्नुको कारण अक्सिजनको अभाव पनि हो । गम्भीर बिरामीलाई समयमै आईसीयु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि कारण हो ।
अस्पतालमा तत्कालै शय्या पाउने अवस्था नरहे पनि आफूखुशी औषधि र अक्सिजन प्रयोग नगरेर चिकित्सकको सल्लाह लिए राम्रो हुन्छ । त्यसैले चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गर्ने बानी बसालौँ ।